မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): အတင်းတော့ မဟုတ်ဘူး အခုတလော ဟော့နေတဲ့ သတင်းတစ်ခုဗျို့းးးးးးး
အတင်းတော့ မဟုတ်ဘူး အခုတလော ဟော့နေတဲ့ သတင်းတစ်ခုဗျို့းးးးးးး
ဘာအတွက် ရိုက်လည်းတော့မသိဘူး ..ကြည့်ရသူတွေက ရင်တဖိုဖိုပဲ..ခွိ.း)
တကယ်လိုက်ဖက်တယ် သူတို့ ဗီဒီယိုလေးကလည်း ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်
အခုတလော ခေတ်စားနေတဲ့ သတင်းလေးတစ်ခုကတော့ မိုးဟေကိုရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
အခြေအနေ နှစ်ဖက်ရှေ့ နေတွေကနေ အပြန်အလှန် သတင်းတွေ ထည့်နေကြတယ်
ဆိုတော့ကာ ဘာလဲတော့ မသိဘူး ။ဟိုးအရင်ကတော့ အတော်လေး ဟော့တယ်နော
ဘာညာ ဘာညာ တွေပါ ကြားလိုက်သေးတယ် ။ ဗီဒီယိုတွေ ဘာတွေပေါ့ ။မီဒီယာတွေ
လွတ်လပ်လာပီဆိုတော့ ရေးကြည့်တာ ။ ကျနော် သတင်းထောက်တော့ မဟုတ်ဘူး
ဟိုနားကောက် ဒီနားကောက် လျှောက်လျှောက် ရေးကြည့်တာပါ ။ ဗဟုသုတဖြစ်ဖို့ 
မိုးဟေကိုရဲ့ အရင်က ဇာတ်လမ်း ဗီဒီယိုလေး တင်ပေးလိုက်တယ်နော် ။ အမှန်ဆိုရင်
ဒီဗီဒီယိုကို အခုမှ သိတာ ။ ဟိုဗီဒီယိုက ပိုနာမည်ကြီးတာကိုးဗျ..း).....။ ဆိုတော့ကာ
မကြည့်ရသေးသူ ကြည့်ပေါ့ဗျာ ။အခုတင်ပေးတဲ့ ရဲလေးနဲ့ ပုံကလည်း လွန်တယ်ဗျို့ ။
ဘာအတွက် ရိုက်လည်းတော့ မသိဘူး ။ အင်း ပြောရတော့ခက်ပ...ပြောတောပါဘူး။
မင်းသမီးချစ်ရတာလည်း မလွယ်ပါ့လား.နော်..။ ခွင့်ပြုတယ်......ခွင့်လွတ်တယ်......တဲ့
ငါကတော့ ဓားနဲ့ ထိုးမယ် ၊ ဒုတ်နဲ့ ရိုက်မယ် ၊ အဆင်ပြေရင် အက်စစ်နဲ့ ပါ ပက်မယ်
ကဲ ဖလမ်းဖလမ်း ဗဟုသုတလေးပါကွယ်......ပုံ..နန်းခင်မောင်................................။
Video လေးက တယ်လန်းတယ်နော် ကြည့်မရ မေးကတောင်း..ပို့ မယ်...................။
စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းတယ် ကြည့်ရတာ. ဘာလို့ များ အခုလိုတွေ ဖြစ်ကြပါလိမ့် ..။
ပုံရဲ့ မူရင်းလင့်မှာ ဖလမ်းဖလမ်းတွေ - http://couple.myanmarcelebrity.com
Author Anonymous at 7:40:00 PM
Labels: စွယ်စုံသတင်းထူး, အနုပညာရှင်များ၏ဖလမ်းဖလမ်းပုံ
ဘာတွေဖြစ်လို့လဲ မီးဘာမှသိဘူး ဟီး... အပေါ်ဆုံးက ရဲလေးနဲ့ပုံကလည်း လန့်ထှာ >.<
da zout kann said...
ဘာတွေတင်ထားတာလဲဟင်... မေးလ်ပို့ပေးနော်... ကြည့်မရဘူး...
Zaw Hein Kawthaung said...
ကိုညီ မင်း said...
ကြည့်မရ လို့ မေးပို့ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ magic.koko2011
Htunkyaw Oo said...
ကြည့်မရလို့ ပို့ပေးစေလိုပါတယ် mr.balagyi007@gmail.com
saw han said...
ကြည့်လို့မရလို့ zawsenggs@gmail.com ကိုပို့ပေးစေချင်တယ် thanks
Myo Chit said...
please send me by email..myochit05@gmail.com
Hnin Thet said...
please sent my mail because of i couldn't see.thank
ကြည့်လို့မရလို bro please sent
Mg Hein Htet Zaw said...
ပြောရမှာအားနာတယ် ဗျာ ကြည့်လည်းကြည့်ချင်တယ် ပို့ပေးနော် yoieyoie154@gmail.com ဒီမှာကသိတယ်မဟုတ်လား ကျကျနေတယ် အင်တာနက်ပါ
NAY AUNG said...
bro please send me yehtutwin1998@gmail.com .... Thanksalot
Thet Naung said...
ကျွန်တော်. fb မှာ ခသာာနညအေ၇းလို. မရဘူး
mic moe oo said...
အော် မိုက်ပါတယ် သူဟာနဲ့သူကတော့အမြဲမိုက်တယ်
Soe Thu said...
please send to (soethu.sys@gmail.com)Thank you for all
Dragon Phyo said...
Min Myant said...
ဘာတွေလဲဗျာ ပို့ပေးပါ minmyant54@gmail.cm